Nagarik News - ये जवानी है दिवानी'ले नेपालबाट तीन करोड!
ये जवानी है दिवानी'ले नेपालबाट तीन करोड!
12 Jun 2013 | 11:29am
काठमाडौं – पछिल्लो समय रिलिज भएको नेपाली फिल्महरु 'उमा', 'साघुँरो' र 'अन्तराल'ले राम्रो व्यापार गर्न सकेनन्। तर, दुई साताअघि रिलिज भएको बलिउड फिल्म 'ये जवानी है दिवानी'ले भने राजधानीका १६ वटा हलबाट डेढ करोडको व्यापार गर्न सफल भएको छ। मंगलबार साँझसम्मको रिपोर्ट अनुसार यस फिल्मले नेपालभर तीन करोड उठाउने सम्भावना देखिएको छ।
'यसको व्यापारबाट आएको १५ प्रतिशत कमिसन स्थानीय वितरक गोपीकृष्ण मुभिजले पाउँछ। यसलाई नेपालमा रिलिज गर्न हामीले अग्रिम पैसा तिर्नु परेन। दुई साताको अवधिमा राजधानीमा डेढ करोड कमाइ गरेको छ,' गोपीकृष्ण हलका तीर्थ पौडेलले भने।
भारतीय प्रोडक्सन कम्पनी युटिभीसँग साझेदारी गरेर गोपीकृष्णले 'ये जवानी है दिवानी' नेपालमा रिलिज गरेको हो। यसअघि गोपीकृष्णले ७५ लाखमा नेपाल अधिकार किनेको 'एक था टाइगर'ले पनि नेपालमा तीन करोड व्यापार गरेको थियो।
'हामीले १५ हजारदेखि ५ लाखसम्ममा विभिन्न हलहरुलाई फिल्म बिक्री गर्ने गरेका छौं। राजधानीको क्युएफएक्सले ५ लाखमा फिल्म किनेको थियो,' उनले भने। गोपीकृष्णले समेत शनिबारदेखि अन्य फिल्म हटाएर 'ये जवानी है दिवानी' लगाइरहेको छ। राजधानीबाहेक पोखरा, विराटनगर, धरान र बिर्तामोडमा फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको उनले जानकारी गराए।
अरुबेला बलिउडका ठूल्ठूला फिल्म किन्ने नेपाली वितरक एप्पल इन्टरटेनमेन्टले समेत यसपालि गोपीकृष्णबाट 'ये जवानी है दिवानी' किनेर आफ्ना पकडमा रहेका हलमा चलाएको थियो। राजधानीका बिग सिनेमा र एफक्युबले दिनको आठ र क्युएफएक्सका जयनेपाल, सिभिल मल र कुमारी प्रत्येकले दिनको चार शो 'ये जवानी है दिवानी' देखाइरहेका छन्।
'नेपालमा फिल्म हेर्ने दर्शक प्रशस्त छन्। त्यसैले फिल्मले राम्रो कमाइ गरेको हो। अझ पनि हलमा दर्शकको भीड बाक्लै छ,' क्युएफएक्सका वसन्त मानन्धरले भने। पहिलो पटक विश्वज्योति हलले समेत रातिको शोमा यो फिल्म देखाएको थियो। 'गत सोमबार देखि फिल्म रिलिज गरेका थियौं। विश्वज्योति हलमा हिन्दी फिल्म चल्छ भन्ने थाहा नभएर दर्शक आएनन्। अर्को सातादेखि निरन्तर राति शोमा हिन्दी फिल्म चलाउने छौं,' विश्वज्योतिका कर्मचारी मनोज केसीले भने।
« जियाको श्रद्धाञ्जली सभामा बलिउड स्टार श्रीलंकामा ५० वर्ष पुरानो मुम्बई! »
सय करोडमाथि'जवानी दिवानी'